Resaky ny mpitsimpona akotry : avy any Anjozorobe dia Mahamasina | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : avy any Anjozorobe dia Mahamasina
Resaka roa toa mifanipaka no nandrafitra ny vaovaon’ny faran’ny herinandro teo. Mifanipaka satria ny iray fahoriana tsy roa aman-tany, ny iray kosa maneho firavoravoana. Iry voalohany niseho ny sabotsy tany Anjozorobe, ilay faharoa kosa tetsy Mahamasina, nandritra ny fandraisana ny kardinaly Parolin izay iraky ny Papa avy any Vatikana. Maro ny resaka efa natao tamin’ ireo tranga roa ireo fa ny fiainan’ny zanak’olombelona tokoa moa toy voatra ampangoro ka misy ny ambony ary misy ny ambany. Raha misy ny faly, misy koa ny mitomany.
Manoloana ilay tranga voalohany aloha, azo lazaina fa niteraka resabe tokoa izy iny. Tao ny nahitsy sy tsy niolakolaka ka nanamafy fa hadisoan’ilay mpamily tanteraka no nahatonga ny loza satria tsy natao ho fitondrana mpandeha ny karazan’ny fiarabe toy ireny. Ao koa anefa ireo somary mba tony fihetsika ka milaza fa na inona na inona lazaina, noho ny haratsin-dalana, tsy misy afa-tsy ireny no fiara azon’ny any ambanivohitra ianteherana amin’ny fivezivezena.
Angaha moa tsy samy marina izany? Ka ny an’iza ary no ho tohanana? Izay no antom-pisian’ny fitsarana izay voalaza fa fialofan’ny madinika sy aron’ny mpitondratena. Ny irariana dia hitsara marina araky ny feon’ny fieritreretany sy araka ny làlana tokoa izy fa tsy araky ny teritery na zavatra hafa. Azonao ny tiana hambara.
Raha hitodika tamin’ny zava-nisy tetsy Mahamasina indray dia vory lanina ny mpino katôlika nihaona sy nandray ny solontenan’ny Papa. Ny isan’ny nanaitra ny maro dia ny fanatrehan’ ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena teo aloha sy ankehitriny. Midika izany fa nanambatra ny tsy nitovy fijery iny fihaonam-be iny. Zovy no tsy nahalala fa zava-tsarotra toy ny mitady gisa mainty vao nahavita nampihaona azy dimy mirahalahy tamin’ny fotoan’androny. Fanelanelanana tsy nifankahitana vao nahatonga azy ireo tanatin’ny efitrano iray. Na ny fetim-pirenena sy ny Asaramanitra teny Iavoloha aza tsy nahafahana nampifanatri-tava azy ireo.
Vita ary iny ny teny Mahamasina. Dia hanao ahoana indray izany ny tohiny? Hiverina ho toy ny sakay sy maso indray ve sa mba hampandefitra ny hambom-po pôlitika ka hifanatona? Asa lahy. Saina entin-tompo io ka ny tsirairay no mandinika. Adinodino sy takotakona tao anatin’izany rehetra izany ny resaka vidim-piainana sy saran-dalana izay samy nafampana tato ho ato.